Usuku My Pet » 4 Imikhuba Onamandla Of Happy Ubudlelwano
Wake wayinakekela isikhathi sokuzindla phezu indlela ukuziphatha amaphethini akho kuthonye uthando ukuphila kwakho kube ngcono noma sibi? Kukhona izinto enizenzayo ngokungazi ukuthi umthelela ubuhlobo bakho ngendlela eyakhayo, njengoba nje kukhona ezinye onkhe ukuthi waba uhlobo oluthile nature yesibili ngawe, kodwa drive umlingani wakho nuts. Nakuba kwabokuqala ukugcina, ungase ucabangele ukususa uhlobo imikhuba yesibili futhi ngandlela-thile imikhuba nobuhlobo obujabulisayo kuphela aphumelele iphenduke mkhuba.
1. Aphathe umlingani wakho ngenhlonipho
Inhlonipho luyinto ibuphi ubuhlobo kufanele babe, kungakhathaliseki ukuthi siyalingwa ukhuluma Thumela esikoleni esiphakeme, omunye night stand noma ukuphola abayitoho. Ukwelapha umlingani wakho ngenhlonipho iba ebaluleke kakhulu lapho ngo ukungenela ubuhlobo obungathi sina, ikakhulukazi uma ufuna ibe emshadweni esaphila kuze kube nini nanini. Ukubonisa inhlonipho silingana ekuboniseni uthando, njengoba nje hhayi ukusiphatha umlingani wakho ngenhlonipho empeleni kusho ezwakalisa ukungamukeleki yakho, yokuntula kwenu ukwethenjwa noma ukwamukelwa.
Ukuhlonipha umlingani wakho kusho ezibonisa ukuthi niyazithanda for bangobani. Ungase ube nemibono engafani ukuphila, kodwa lokhu akusho ukuthi unelungelo bangamhloniphi / yakhe. Lokhu kuyinto okufanele siyikhumbule ikakhulukazi uma ababili kini abavumelani ngokuthile. Ukulwa, ngisho nomncane kunabo ones, kukhona izikhathi lapho imibhangqwana bavame ukukhohlwa empeleni basuke iqembu futhi kufanele baziphathe kanjalo.
2. Hamba ehamba ebambe isandla
Lokhu umkhuba uzoba nomthelela omkhulu imizwa yakho, empilweni yakho kanye ubuhlobo bakho. Kuba ithuba ukuthola umsebenzi ngaphambi noma ngemva kosuku sedentary ehhovisi ithuba ukuchitha isikhathi izinga njengoba umbhangqwana. Bebambene ngezandla futhi ikhuthaza ingxoxo nice njengoba sekuyisikhathi uphumelele ukuyeka imisebenzi yakho yasekhaya yansuku zonke futhi asuse ikhanda lakho ndawonye.
3. Chitha kusihlwa ndawonye kude TV
Ukubuka i-TV kungase kube omunye ethandwa kakhulu (uma kungenjalo the ukuzedlula zonke) esikhululekile umsebenzi time, kodwa ngokuqinisekile ngeke kukusize njengoba umbhangqwana. The TV empeleni idonsela ukunakekela zonke, osebenza njengoba ngesivalo zokuxhumana. Ungakugwema kanjani okungenzeka ukuxhuma nomunye kuyilapho ubuka ithelevishini? Indlela mayelana ukucima TV (okungenani ngezikhathi ezithile), futhi isikhathi esithile izinga njengoba umbhangqwana? Ungase ukukhuluma usuku lwakho, ungase Snuggle on the usofa, khumbula usuku lwakho lokuqala noma uhlela uhambo lwakho. Anything egxile nobabili iya.
4. Yenza ukushukuma nice for umlingani wakho
Indlela ngokuvusa ikhofi umyeni wakho ekuseni? Noma ebiza umama wakhe for the iresiphi kanye ukupheka owawuzithanda useyingane dish sakhe? Indlela ukuthenga intombi yakho ikhekhe eyithandayo? Noma kangcono ngisho, bayobhaka lona? It akudingeki kube into enkulu. Small ukushukuma nice ukuveza imizwa yakho yothando nenhlonipho. Ukushiya amanothi for nomunye noma imiyalezo ukukusho kuwe ngimkhumbula / yakhe ngezikhathi ezithile kukhona imikhuba ukuthi kungaba nomthelela ngendlela eyakhayo ubuhlobo bakho.